United States | The FNG
December 24, 2013 by 21 South News
ငှက်ပျောသီး ပုံစံ ကျဉ်ကပ် ကွေးကွေး လေးကြောင့် လူသိများ ခဲ့ တဲ့ AK-47 သေနတ် ကို တီထွင် ခဲ့ တဲ့ ရုရှား လူမျိုး မီခေလ်း ကလက်ရှ် နီကောဗ် ဟာ အသက် ၉၄ နှစ် အရွယ်
December 14, 2013 by 21 South News
FNG အသက် ၅၈ နှစ် အရွယ် ရှိ ပြီ ဖြစ်တဲ့ လေကြောင်း ပျံသန်းမှု ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်း
November 25, 2013 by 21 South News
Jason Szep Andrew R.C. Marshall | Reuters (Reuters) – He’s the flashiest tycoon in one of Asia’s poorest cities, withacanary-yellow Lamborghini parked outside his neoclassical mansion.
(unnamed), သတင်း ဆောင်းပါး, News
တပ်ကြပ်ကြီး ရောဘတ် ကို အာဖဂန် အရပ်သား တွေ သတ်မှု နဲ့ထောင်ဒဏ် တစ်သက်ချ
August 24, 2013 by 21 South News 1 Comment
အာဖဂန် နစ္စတန် နိုင်ငံ ကန်ဒါဟာ မြို့တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ က အမျိုးသမီး ၃ ဦး နှင့် ကလေး ၉ ဦး အပါ အ၀င် အရပ်သား ၁၆ ဦး ပစ်ခတ် ခဲ့သည့် အမေရိကန် ကြည်း
ခင်ပွန်း ရဲ့ငယ်ပါ ဖြတ် တဲ့ အမျိုးသမီး ထောင်ဒဏ် တစ်သက် အပြစ် ပေး
July 1, 2013 by 21 South News2Comments
ခင်ပွန်း ဖြစ်သူ အိပ်ပျော် နေ စဉ် မှာ ငယ်ပါ ကို ဓား နဲ့ဖြတ် ပြီး အမှိုက် ပုံး ထဲ လွှတ် ပစ် ခဲ့ တဲ့ အသက် ၅၀ နှစ် အရွယ် ကတ်သရင်း ကူရ် ကို ကာလီဖိုးနီးယား ခရိုင် Orange […]
March 8, 2013 by 21 South News
အိုစမာဘင် လာဒင် ရဲ့သမက် လည်း ဖြစ် တစ်ချိန် က အယ်(လ)ကာယီးဒါး အကြမ်းဖက် ကွန်ယက် ရဲ့ပြော ခွင့် ရ ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်သူ ဆူလေမန် အဘူဂိတ် ကို ဂျော်ဒန် နိုင်ငံ မှာ ဖမ်းဆီး
July 17, 2012 by 21 South News
FNG ၊ ၊အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် အမေရိကန်အခြေစိုက် Atlantic Council မှ ပေး အပ် ချီးမြှင့် မည့် Global Citizen Award
April 27, 2012 by 21 South News
သီရီထက် ၊ ကမ္ဘာ့ ဘဏ်မှာ တင်ရှိ နေတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ က အကြွးတွေ ပြန်ဆပ် နိုင် ဖို့၊ နိုင်ငံ ရေး ၊ စီးပွားရေး နဲ့ပတ်သက် ပြီးသိသာထင်ရှားတဲ့ အပြောင်းအလဲ တွေ ကို ဖော် ဆောင် မှုတွေ ကို […]
ပြည်ပသတင်း, ECONOMIC, News
April 18, 2012 by 21 South News
လူသားချင်း စာနာ ထောက်ထားမှု ၊ ဘာသာရေး နှင့် အကျိုးအမြတ် မယူသော လုပ်ငန်းများ အတွက် အမေရိကန်မှ မြန်မာ ကို တိုက်ရိုက် ငွှေလွှဲပြောင်း နိုင်တော့ မည်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂါ နေ့ က အမေရိကန်
တာဝေးပစ် ဒုံးပျံ အိန္ဒယ က အောင်မြင်စွာ ပစ်လွှတ်
April 18, 2012 by 21 South News 1 Comment
အိန္ဒယ နိုင်ငံ က ညူကလီးယား ထိပ်ဖူး သယ်ဆောင် နိုင်ပြီး ၊ ကီလိုမီတာ ၅၀၀၀ ကျော် (မိုင် ၃၁၀၀) ကျော်ထိ ပစ်လွှတ် နိုင်သည့် အဂ္ဂနီ အမည် ရှိ ဒုံးပျံ ကို မကြာခင် ပစ်လွှတ် စမ်းသပ်
April 15, 2012 by 21 South News
ကိုလံဘီယာ နိုင်ငံ မှာ ကျင်းပနေ တဲ့ အမေရိက နိုင်ငံ များ အစည်း အဝေး ကို တက်ရောက်ဖို့သွား ရောက်မှာ ဖြစ်တဲ့ သမ္မတ အိုဘားမား ရဲ့ရှေ့ ပြေး လှို့ ဝှက် လုံခြုံရေး အဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦးဟာ […]
May 1, 2011 by 21 South News
‘Did we fake the moon landing?’ ‘What really happened on Roswell?’ And ‘Where are Biggie and Tupac?’” Obama’s White House Correspondent Speech MUST READ ယနေ့ ကျင်းပသည့် အိမ်ဖြူတော် သတင်းထောက် များ ညစာ […]
April 26, 2011 by 21 South News
Reaching Out Swarovski among the companies under fire for breaking spirit of renewed EU sanctions EPA By Andrew Buncombe and Joseph Allchin Monday, 25 April 2011 The luxury crystal and […]
(unnamed), ပြည်ပသတင်း, News
April 14, 2011 by 21 South News
FNG၊ ၊လစ်ဗျား ခေါင်းဆောင် ကဒါဖီ ရဲ့ တပ် တွေ ကို အမေရိကန် တိုက်လေယာဉ် တွေက လည်း ဒီနေ့ လေကြောင်း ကနေ တိုက်ခိုက်မှု လုပ် တယ်လို့ပင်တဂွန် သတင်းထုတ် ပြန်မှု တစ်ခု မှာ ဖော်ပြ ထား ပါတယ်။ မနေ့ က ဗြိတိသျှ […]